:Bọchị: Nọvemba 17, 2019
Yenikapı Hacıosman Metro Stations na utezọ: Oge mbu nke ahịrị dị n'etiti Yenikapı na Hacıosman, nke ebido na 1992, etinyere aka na Septemba 16. Kwa ụbọchị, nkezi [More ...]
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç tinyekwara ọrụ dị mkpa na mbọ a na-eme ka Kayseri bụrụ obodo njem na mpaghara niile. N'ihi ọrụ nke Onye isi ala Büyükkılıç, njem njem balloon bidoro na mpaghara Soğanlı na [More ...]
Oge Konya Tram: Anyị ekepụtala usoro ọgbụgba Konya Rail na Map Transportation maka gị site na ime nyocha zuru ezu maka Usoro yagbọ Mmiri Konya na Map. Konya tram akara, a tramway na Turkey dị Konya obodo [More ...]
Ihe oru ohuru iji nyefee ahia na Kocaeli aka ibi ndu; Obodo Kocaeli na-aga n'ihu na-eme ụzọ mgbakwunye na ụzọ a na-adọba n'okporo ụzọ ka ụmụ amaala bi na mpaghara ahụ wee nwee ike ịga njem nke ọma. a [More ...]
Gọọmentị China na-aga n'ihu na-abawanye azụmahịa na mba ndị nakweere atụmatụ Belt Road. Nlekọta ndị China bịanyere aka na 30 Generation Road nkwekọrịta njikọta nke mba 137 na nzukọ mba ụwa nke 197 n'oge Ọktọba. China [More ...]
Onye Minista Turhan Bingöl nyochara Ọrụ Na saịtị Site; Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, onye bịara Bingöl ime ndị kọntaktị, ya na AK Party osote onye isi oche Cevdet Yılmaz na Bingöl na Erzincan [More ...]
Kars Edirne Railway Line ga-abụ otu n’ime ihe ndabere dị mkpa nke Ọgbọ Ọgbọ; Ọgbọ na Turkey dị ikele maka n'ụzọ "Central korido" malitere ikwu na a ọzọ gbara ọkpụrụkpụ ụzọ. N'ime akwụkwọ akụkọ China "Baku Tbilisi agbakwunyere n'ahịrị Kars [More ...]
Izmir Blue train, Central Anatolia Blue Train, East Express, South Express, Ọdọ Mmiri Van Express, Konya Blue Train na Cukurova [More ...]
Kadıköy Tavşantepe Metro Hours: 1 nke ahịrị. Emechara ọkwa na 2012 ma mepee iji rụọ ọrụ na ọdụ 21,7 na mpaghara 16 km n'etiti Kadıköy na Kartal. Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik na Tavşantepe [More ...]
Taa na History 17 November 1871 Baron Hirsch nyere 1 nde francs na òtù ndị Juu ụwa.